Nomery 23: 1-30
Nomery 22 Nomery 23 Nomery 24
Dia narahin'i Balaka izay efa nolazain'i Balama; ary Balaka sy Balama nanatitra vantotr'ombilahy sy ondrilahy iray avy teo ambonin'ny isan-alitara.
Ary Andriamanitra dia nihaona tamin'i Balama; ary hoy Balama taminy: Ny alitara fito dia efa namboariko, ary efa nanatitra vantotr'ombilahy sy ondrilahy iray avy teo ambonin'ny isan-alitara aho.
Dia nanao oha-teny Balama ka nilaza hoe: Balaka nampaka ahy avy tany Arama, Ny mpanjakan'i Moaba nampaka ahy avy tany amin'ny tendrombohitra atsinanana: Avia, ka ozôny ho ahy Jakoba; Ary mankanesa aty, ka sahatoy ny Isiraely.
Dia hoy Balaka tamin'i Balama: Ahoana izao nataonao tamiko izao? Hanozona ny fahavaloko ny nangalako anao, kanjo nitso-drano dia nitso-drano azy kosa hianao.
Dia hoy Balaka taminy: Andeha mba hiaraka amiko ho any amin'ny tany hafa izay hahitanao azy; kanefa ny sisiny ihany no ho hitanao eo, fa tsy ho hitanao avokoa izy rehetra; ka ozôny ho ahy ao izy.
Dia nitondra azy tao an-tsaha Zofima izy, tao an-tampon'i Pisga; ary nanorina alitara fito izy ka nanatitra vantotr'ombilahy sy ondrilahy iray avy teo ambonin'ny isan-alitara.
Dia hoy izy tamin'i Balaka: Mitoera eto anilan'ny fanatitra doranao, fa izaho hankery hihaona amin'i Jehovah.
Ary Jehovah nihaona tamin'i Balama, dia nanisy teny teo am-bavany ka nanao hoe: Miverena amiko mankeo amin'i Balaka, ary izany no holazainao.
Dia nanao oha-teny Balama ka nilaza hoe: Mitsangàna, ry Balaka, ka mandrenesa; Atongilano amiko ny sofinao, ry zanak'i Zipora;
Tsy mijery faharatsiana eo amin'i Jakoba Izy, Ary tsy mahita fahoriana eo amin'ny Isiraely; Jehovah Andriamaniny no nomba azy, Ary hoby fanao amin'andriana no re eo aminy.
Nentin'Andriamanitra nivoaka avy tany Egypta izy, Ary manan-kery[Na; tandroka.] toy ny ombimanga.
Fa tsy misy fisikidianana eo amin'i Jakoba, Ary tsy misy fankatovana eo amin'Isiraely.[Na: Fa tsy leon-tsikidy Jakoba ary tsy leom-pankatovana Isiraely.] Fa amin'ny fotoana no hilazana amin'i Jakoba sy Isiraely izay efa nataon'i Jehovah.
Dia hoy Balaka tamin'i Balama: Aza manozona na mitso-drano azy akory.
Fa namaly kosa Balama ka nanao tamin'i Balaka hoe: Tsy efa nilaza taminao va aho ka nanao hoe: Izay rehetra holazain'i Jehovah, izany no hataoko?
Dia hoy Balaka tamin'i Balama: Andeha ho entiko any amin'izay tany hafa hianao; angamba ho sitrak'Andriamanitra ny hanozonanao azy any ho ahy.
Dia hoy Balama tamin'i Balaka: Manorena alitara fito eto ho ahy, ka manamboara vantotr'ombilahy fito sy ondrilahy fito.
Ary Balaka dia nanao araka izay efa nolazain'i Balama ka nanatitra vantotr'ombilahy, sy ondrilahy iray avy teo ambonin'ny isan-alitara.